Nceda iinkonzo zeWMS kwi-Microstation - Geofumadas
Nceda iinkonzo ze-WMS kwi-Microstation
Epreli, 2014 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Iyaziwa njengeenkonzo zeemephu zeenkonzo zeWebhu ukuhambisa i-vector okanye i-Raster cartography eyenziwa nge-intanethi okanye kwi-intranet isebenzisa umgangatho we-WMS okhuthazwa yiKhomishini ye-TC211 ye-OGC, i-Open Geospatial Consortium. Ngokwenene, yintoni le nkonzo eyenza ukuba ibonise njengomfanekiso omnye okanye iindidi ezininzi kunye nomzobo nophawu olucacileyo kwinkqubo ethumela idatha. Oku kungathunyelwa nge-ArcGIS Server, Geoserver, MapServer, okanye nabanye abaninzi.
Kukho izizathu ezininzi zokuphumeza, enye yazo kukukhonza idatha ngaphandle, kodwa akuyena kuphela.
Kwimeko yangaphakathi, endaweni yabasebenzisi ababiza i-orthophoto egcinwe kwindawo njengeefayile zodwa, (apho ikhophi ingabibiwe), unokwenza inkonzo yomfanekiso eya kwenza izinto zibe lula. Akusekho isidingo sokubiza umfanekiso ngamnye womfanekiso, kodwa inkqubo ibonisa oko kuhambelana nokuthunyelwa.
Makhe sibone indlela iBentley Microstation eyenziwa ngayo.
Oku kwenziwa kwiMaster Manager, ukhetha ukhetho lokudala iWMS entsha.
Simele sibonise idilesi yenkonzo ye-WMS, kulo mzekelo:
Umzekelo, ukuba ndicela iinkonzo ze-cadastre yaseSpeyin, usebenzisa le dilesi:
Ibuyisela zonke iinkcukacha zedatha eziqhutywa nge-wms
Iqhosha «Yongeza kwimephu»Isetyenziselwa ukukhetha enye okanye iqela. Ukuba ezininzi zongezwa, zonke ziya kuza njengenkonzo enye, kumyalelo ogqityiweyo apha. Ukuba zongezwa ngokwahlukeneyo, zinokucinywa ngokwahlukeneyo.
Kwakhona kunokwenzeka ukugcina ifomathi yomfanekiso, utshintshe inkqubo yoququzelelo kunye nokubonisa izilungiso.
Emva koko kukho iqhosha lokugcina nokuqhubeka ukuhlela (Gcina...) kunye nokulondolozwa (Gcina kwaye Xhawula...) I-Microstation oko yenzayo, kukudala ifayile ye-xml apho izakhiwo zeefowuni zedatha zigcinwa, oku kwandisa .xwms.
Emva koko iifayile ze-xwms zibizwa xa zifunekayo, kwaye kufana nokuba ne-raster layout efanayo kunye nokukhetha ukutshintsha umyalelo, ukungafihli, njl njl.
Kucacile ukuba isevisi ye-WMS ifundwa kuphela, kuba kubonakaliswe ngendlela yomfanekiso. Ukubiza ii-vector iinkonzo kufuneka sibize iiNkonzo zeMpawu zeWebhu (WFS), ongenakukwazi ukubonisana kuphela nedatha yenkcazo kunye neyodwa kodwa uhlele kwakhona. Kodwa le ngongoma yecandelo elinye nelinye ibali ukuba kwimeko yeBentley sele sele ineentsuku zayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Microstation ngqamanisa ne Google Earth
Post Next MDT, isisombululo esipheleleyo seProjecting and EngineeringOkulandelayo "